Mehndi Designs 2018 ngwa Download - Free Web APP maka gam akporo
Mehndi Designs 2018 ngwa
Ọ bụrụ na ị na-agbalị maka ọhụrụ Mehndi Designs of 2017-18 mgbe i nwere ike inwe doro anya na kwesịrị ekwesị ụzọ nke na nbudata a cellular software.
Ugbu a a ụbọchị, ọtụtụ n'ime ndị na-eto ndị inyom na-achọ ngwa ngwa na nanị inweta Mehndi Designs nke nwere ike ji mee ihe n'ime Android mobiles site anyị nnọọ uru mehndi-imewe software. Anyị n'anabata ị ka ojiji nke anyị ọhụrụ mehndi-imewe software, nke ga-abụ nnọọ uru na kemfe maka nke ọ bụla gam akporo n'ji. Nke a ngwa accommodates niile nzọụkwụ-site-nzọụkwụ aghụghọ dị ka ọnweghị onye ga-ebi nwere.
Anyị na-na ọkọdọ rubere dum Mehndi-Designs anyị software na ike ịbụ nnọọ aka maka ndị na-agbalị maka ọhụrụ ọchịchọ, na etu iche na nke a mara mma mehndi aghụghọ. Anyị ọkà mehndi emepụta chepụta niile anyị mehndi aghụghọ. O nwere ihe nile ụdị mehndi aghụghọ, na na:
• Mehndi aghụghọ maka n'ọbụ aka na ụkwụ.
• Agbamakwụkwọ, n'ịgba na iwu mehndi-aghụghọ.
• Pakistani na Indian mehndi-aghụghọ.
• Arabic mehndi-aghụghọ.
• Shadded, ewute na multi acha mehndi-aghụghọ.
• Black na ogho uhie mehndi-aghụghọ.
• nkwojiaka ụdị mehndi-aghụghọ.
• Easy ịgbapụta mehndi-aghụghọ.
• Pazeeb ụdị mehndi-aghụghọ n'ihi na ft.
• Full shadded mehndi-aghụghọ.
• * Tụkwasị ụdị tikki mehndi-aghụghọ.
• akwụkwọ sample mehndi-aghụghọ.
• Pam ekwuru ụlọ mehndi-aghụghọ.
• fashionable na minimalist mfe Ifuru mehndi-aghụghọ.
• Ọ nwere ike na-azọpụta ọtụtụ nke picture na SD kaadị ma ọ bụ na usoro tinye n'ọrụ.
• Ekekọrịta ya na gị na di na nwunye site na WhatsApp, fb, Bluetooth, Twitter na na
• Set photos ka akwụkwọ ahụaja ma ọ bụ ihe ndị ọzọ.
• Swapping maka igodo.
• gasịrị ghọrọ na mbụ button.
• anọghị n'ịntanetị gallery photos.
• Zooming nhọrọ: mbugharị na na mbugharị na si.
All foto a software na-kweere na-n'ihu ọha ebe.
Anyị na-àjà di ntakiri mgbasa ozi na mmezi obi ụtọ itinye n'ọrụ. Enye anyị ogbo kacha mma ka ihe niile doable oke fixations.
Biko kpọtụrụ anyị maka ihe ọ bụla mgbanwe na gbara ajụjụ.
Ọ dịghị akwụkwọ dee ịda iwu a pụtara na ihe ọ bụla arịrịọ iji wepụ otu n'ime ọtụtụ foto ma ọ bụ aha ma ọ bụ logos na-kpam kpam na-asọpụrụ.
Download Some Different Best Apps maka mobiles
3.0.1.1.3 NexMusic gam akporo ngwa
YouCam zuru okè Latest Version 5.22.8 maka free – Best égwu N'ihi mobiles
AZ Screen edekọ ngwa Download – Best Apps maka mobiles
GTA San Andreas ngwa v1.08 Free Download + Data + Mod [Latest Version]
Max Cleaner maka gam akporo – ngwa Download – Best Apps maka mobiles
Akụ aka Down ngwa Download – Free Arcade egwuregwu n'ihi na gam akporo – Best Apps maka gam akporo
Download CCleaner ngwa v1.22 – Best Apps…
VMate ngwa Download – Free Entertainment APP…
Temple Run 2 Ngwa 'enwusi ájá’ Adventure…
8 Ball Pool ngwa Download – Free…
Tutu Inyeaka App ngwa Download – Free…